Nin 3 sano meyd ahaa oo hada la ogaaday | Somaliska
Xaafada Tumba ee magaalada Stockholm ayaa laga helay oday waayeel ah oo gurigiisa mayd ku ahaa mudo 3 sano ah. Ninkaan meydkiisa ayaa la ogaaday ka dib markii rag internet xirayay ay arkeen albaabka gurigiisa oo furan. Booliska ayaa guriga ka helay warqado 3 sano ka hor la soo diray oo aan wali la furin iyo xitaa cuntada faranjiyeerkisa ku jirta ayaa waxaa ku qoran 2008. Ninkaan ayaa lacagtiisa benshanka waxay ku soo dhaceysay akoonkiisa mudadaas uu meydka ahaa asagoo sidoo kale lacagaha biilasha si otomatik ah bankigiisa uga dhiibayay. Ninkaan ayaa waxa uu leeyahay qaraabo asagoo la sheegay in wiilkiisa uu nool yahay kaasoo hada booliska ay la xiriirayaan. Booliska ayaa sheegay in ninkaan iyo kharaabadiisa aysan wax xiriir ah ka dhaxayn. Sida loola dhaqmo dadka waayeelka ah ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu fool xun ee ka dhaca wadankaan, marka ay waalidka duqoobaan ayaa ilmahooda iska fogeeyaan oo lagu tuuraa goobta lagu haayo dadka waaweyn halkaas oo niyad xumo iyo fikir ay ugu dhintaan. Ama waxaa ku dhacda sida ninkaan oo kale oo haddii ay kaligood noolaadaan aysan daryeelin caruurtooda.
Nin 3 sano meyd ahaa oo hada la ogaaday
Xaafada Tumba ee magaalada Stockholm ayaa laga helay oday waayeel ah oo gurigiisa mayd ku ahaa mudo 3 sano ah. Ninkaan meydkiisa ayaa la ogaaday ka dib markii rag internet xirayay ay arkeen albaabka gurigiisa oo furan. Booliska ayaa guriga ka helay warqado 3 sano ka hor la soo diray oo aan wali la furin iyo xitaa cuntada faranjiyeerkisa ku jirta ayaa waxaa ku qoran 2008.
Ninkaan ayaa lacagtiisa benshanka waxay ku soo dhaceysay akoonkiisa mudadaas uu meydka ahaa asagoo sidoo kale lacagaha biilasha si otomatik ah bankigiisa uga dhiibayay.
Ninkaan ayaa waxa uu leeyahay qaraabo asagoo la sheegay in wiilkiisa uu nool yahay kaasoo hada booliska ay la xiriirayaan. Booliska ayaa sheegay in ninkaan iyo kharaabadiisa aysan wax xiriir ah ka dhaxayn.
Sida loola dhaqmo dadka waayeelka ah ayaa waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu fool xun ee ka dhaca wadankaan, marka ay waalidka duqoobaan ayaa ilmahooda iska fogeeyaan oo lagu tuuraa goobta lagu haayo dadka waaweyn halkaas oo niyad xumo iyo fikir ay ugu dhintaan. Ama waxaa ku dhacda sida ninkaan oo kale oo haddii ay kaligood noolaadaan aysan daryeelin caruurtooda.
Soomaali khaniisiin isaga dhiibtay Sweden oo sharciga loo diiday
Dooda madaxda xisbiyada baarlamaanka
Bismilah wa arin cajib ah lkn illah aya kamagan galanay in walidken sidas kudhacdo wana diin la anta kajirta wadamada rer galbedka marka ilah kuwii walidkod xanaaneyo hanaga yelo
March 26, 2011 at 21:11
Diinta fiicanaa, Allow adaa mahad leh oo naga dhigay muslimiin Allow nagu sug oo nagu dil muslimiin. Aamiin. laakiin waxaa iga su’aal ah dhaqtarkiisa ma tabin miyaa maqnaashaha ninkan? Halkan, America, inataas muddo le’eg qof ma maqnaan karo any way waa ansiib darro weyn. Muslimiintooy Allah ku mahadiya nicmada ISLAAMKA ah ee uu ALLE nagu galadeystay Allow xaqa nagu hanuuni OO baarriyaal naga dhig
March 27, 2011 at 09:20
Ku Cibra Qaata , Gaalada laga daba ordaa waa kuwa sidaaya !!
Alla maxaan inagoo indha leh , aan qof indha la’ u dhiibanay Usha !!
Islaamku macaanaa .
Xaqsanaa Alloow na fahamsii
3-sano Aa oo kan postalaha maxaw urka u dareemi waayay dulli helaha ama sxbadiiis Maxey usoo xariiiri waayeen. Dhibkaas ayeey lee dahay xariir la,aantu. Dadki awka dhintay waxaan leenahay kasamra waa qunyay odaygaaase asc